JAGO BANNAAN EE BAKHAAR HAYE/ Sumad Lam.1130 - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
JAGO BANNAAN EE BAKHAAR HAYE/ Sumad Lam.1130
24.08.2011 | Qeybta Guud
Dhakhaatiirta aan xuduuda Lahayn waa urur caalami oo aan dowli ahayn. Dhexda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn mashruuceeda soomaaliya waxaanu hada u qoreeynaa jago bakhaar haye, Saldiga Muqdisho.
1.1 Mas-uuliyada guud:
Maamulka bakhaarad saadka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee muqdisho.
Xaqiijinta, keydinta saxda ah ee keydka iyo qalabka saad gud ahaan mashruuca.
Kamasuul ka ah qoraalka dhamaan gelida iyo kabixda bakhaarada habka nidaamka habmaamuuska udegen Dhakhaatiirta aan xuduuda Lahayn.
Ilaalinta keydka iyo habeenta qoraalka diiwaanada habka nidaamka maamuuska udegen Dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn iyo amarada ay bixiyaan saldhigyada laamaha saadka.
Firfircooni goobta shaqada. Laga yaabe in la weydiiya kashaqeynta goob aan ahayn xarunta dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn oo ku meelgaar ahaan meel ka baxsan muqdisho.
1.2 Howla gaarka ah:
Xaqiijinta badbaadada bakhaarka,
Kamasuul ah keydinta dhamaan qalabka,
Xaqiijinta sax ah iyo u isticmaalida skafaalayaasha iyo sanadiiqda hadba sida baahidu tahay.
Xaqiijinta nidaamka gudaha bakhaarka si wax weliba loo gaari karo loona arki karo.
Maamulida nadiifinta bakhaarada iyo qalabka keydsan ugu yaraan hal mar dodobaadkiiba.
Bakhaarada waa in loo nidaamiyaa sida habqaabeedka ama isticmaalka qalabka.
Bakhaarada waa in loo nidaamiya sida heerka qaabaalka Dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn.
Qalab kasto oo la keeydi waa iney lahaato tilmaan la arki karaa leedahayna karka keydka, loo na galeeyay sida nidaamka iyo qeeybinta bakhaarka.
Dhamaan alaabta xumaan karto waa in la muujiyaa laguna muujiyaa taariikhda dhicitaanka ama xumaansha, gaar ahaan dawooyinka kujira bakhaarka gurmadka degdega ah iyo cunnada kujirta bakhaarka nafaqada.
Maamulka iyo kaantroolka :
Kamasuul ah qabashada dalabka wadaniga iyo caalamiga ah, cadeeynta liiska, tirada iyo ku qorista kaarka keydka
Kamasuul ah qabashada alaabta laga soo iibshay deegaanka iyo ku qorista kaarka keydka qalabka cusub.
Kamasuul ah sameeynta habsami u buuxinta iyo galeeynta xaashiyaha geeynta adeega, xaqiijinta saxiixyada dadka ka masuulka ah in ay saaran yahiin iyo faahfaahinta goobta dejinta.
In aan wax bixid ah la ogolaan la’aanta codsiga wareegtada ah iyo fasaxa saad haya.
Udiyaarinta rarka safar iyo nidaamka xirxirka, xirxirida, udiyaarinta safar rarka aan bakhaarka kujirin iyo ka soo marin, cabirida misaanka, tilmaan sumad kudhigis, diyaarin xaashi rar iyo liisaska dirada xirxirka.
Uqorshee oo uhabeeye safrinta rarka oo dhan goob kasta: xulo qaabka safrinta, la xiriirka qaadaha, diyaari booska, habe xamuulka, diyaari waraaqaha (xaashid safarka, dhoofka), ogeysii goobta dajinta, xaqiijinta tagista rarka goobta, iyo habeeynta nidaamka galeeynta (Heshiiska qiimaha waxaa sameynayo qofka isaga oo la tashanayo Saldiga Saad Barta
Habee nidaamka boorsada waraaqa Muqdisho iyo goobaha kale, xaqiiji waraaqaha in loo diro si joogta ah.
Habee oo diyaari shaqaale sameeya (rarista, dejinta, kaxeeynta, iwm.) rarka.
Buuxinta kaararka keydka:
Nidaam u buuxinta kaararka keydka Dhakhaariirta aan xuduuda lahayn
Samo u isticmaalida nidaamka diiwaanka qalabka
Adeega baxa iyo kan soo galo waa in si sax ah loogu diiwaan geliyaa kaararka keydka.
Aqoonta xaashida adeega:
U isticmaalka xaashiya codsiga adeega iyo kuwa geeynta adeega joogtada ah oo diyaari xaashiyaha safarka iyo liiska rarka goortii
Si joogta ah u sii ama goorta uu codsado saldiga saadka goobta akhbaaraadka sida:
Celcelis isticmaalka bishii,
tirada dalabka ku saleeysan saadka si looga hortago idlaasho ama dilaac.
Ka masuul ah uhabeeynta diiwaanka si ama goor waliba ee loo baahdo.
Bakhaarka mashruuca nafaqada:
Ka masuul ah eegitaanka keeydka iyo taarikha dhicida cunada.
Xaqiiji nadiifinta bakhaarka iyo ka ilaalinta xayawaanada.
Ka masuul ah diyaarinta qalabka gurmadka looga baahanyahay iyo raad raaca wacan.
Xirfadaha loo baahan yahay:
Waa in uu awoodo akhrin, qorid,iyo ku hadal luqada ingriisiga.
Aqoonta aas-aasiga ee bakhaar heynta.
Khibrad shaqooyin la mid ah tan, Khibrad hore ee la shaqeeyn hayada samafal waa mudnaan dheeri ah.
Baahi daneeyn iyo u hogaansanaan mashruuca dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee Spain.
Awood ka mid noqosha shaqaale kale.
Aaminaad, hogaansani iyo awood dhaqsi barasha ah.
Nidaamsan, uruursanaan, nadaafsani iyo xushmad.
Go-aamin wacan iyo dareen dhaqsi iyo mudnaan.
Qaabka shaqada dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn awgeed, firfircooni waa laga ma maarmaan iyo lama huraan.
Ogaasho badbaado iyo caafi.
Hogaansani iyo barasho dhaqsi ah.
Dhammaan musharixiintu waxay u soo diri karaan codsiyadooda ( ayaga oo sharaxaya khibradaha la xiriira, dhiirigelinta, CV, shahaadooyinka iyo waraaqaaha la talinta ) email ama P.O.box kaan: Human Resource Coordinator, MSF Spain Kenya, PO
Box 52837, 00200 Nairobi, email address: msferecruitment@gmail.com
Fadlan soona xigo numberkaan 1130 , kana dhig numberkaan Subject lineka Codsigaaga.
Dadka la xusho keliya ayaa lasoo wacayaa.
Codsiga waxaa lasoo diri karaa ilaa taarikhdu markay tahay 28.8.2011, 17:00 saac.
Tags: MSF, msf w, MSF website